Ch 7 Acts – 2hove
musha / Bhaibheri / MABASA AVAPOSTORI / Ch 7 Acts
MABASA AVAPOSTORI 7
7:1 Zvino mupristi mukuru akati, "Zvinhu izvi ndizvo?"
7:2 And Stephen akati: "Hama Noble uye madzibaba, teerera. Mwari wokubwinya akazviratidza kuna baba vedu Abhurahama, paakanga ari kuMesopotamiya, iye asati akagara muHarani.
7:3 Zvino Mwari akati kwaari, 'Ibvai nyika yako nokuhama, uende kunyika yandichakuratidza kwamuri. '
7:4 Ipapo akabva kunyika yavaKaradhea, uye akagara muHarani. uye gare gare, pashure baba vake vafa, Mwari akamubudisa kunyika ino, umo iwe ikozvino kugara.
7:5 Iye akamupa hapana nhaka mairi, kunyange nzvimbo mumwe danho. Asi akapikira kumupa iyo kuti ive, uye kuti vana vake vanomutevera, kunyange akanga asina kuva nomwanakomana.
7:6 Zvino Mwari akamuudza kuti vana vake vaizova rudzi Anobva kune imwe nyika, uye kuti vaizova muchamanikidza navo, uye kuvabata zvakaipa, kwemakore mazana mana.
7:7 'Zvino rudzi uyo rwavachashandira, Ndichatonga,'Ishe akati. 'Pashure pezvinhu izvi, vanofanira kuenda uye anofanira vagondishumira panzvimbo ino. '
7:8 Zvino akavapa sungano yedzingiso. Uye saka akabereka Isaka akamudzingisa zuva rorusere. Isaka akabereka Jakobho, uye Jacob, gumi evaIsraeri.
7:9 Uye Yemadzitateguru evaIsraeri, kuva godo, vakatengesa Josefa kuEgipita. Asi Mwari waiva naye.
7:10 Iye akamununura kubva pamatambudziko ake ose. Uye akamupa nyasha nouchenjeri pamberi paFarao, Mambo weEgipita. Iye akamugadza ave mutungamiriri pamusoro peEgipita neimba yake yose.
7:11 Ipapo nzara yakaitika zvose muIjipiti uye muKenani, uye kutambudzika kukuru. Uye madzibaba edu haana kuwana chikafu.
7:12 Asi Jakobho akanzwa kuti kwaiva nezviyo muEgipita, akatuma madzibaba edu pakutanga.
7:13 Uye pazuva rechipiri chiitiko, Joseph akanga kuzivikanwa nehama dzake, uye dzinza rake pachena Farao.
7:14 Zvino Josefa akatumira kuti akauya baba vake Jakobho, pamwe nehama dzake dzose, mweya makumi manomwe nemishanu.
7:15 Jakobho akaburuka kuIjipiti, uye iye akapfuura kure, uye madzibaba edu.
7:16 Ivo vakayambuka kupinda Shekemu, uye vakaiswa paguva Abhurahamu raakange atenga mari kubva kuvanakomana vaHamori, mwanakomana Shekemu.
7:17 Zvino nguva cheVimbiso kuti Mwari akanga azivisa Abhurahamu wakaswedera, vanhu vakawedzera uye dzakanga dzawanda muIjipiti,
7:18 kunyange kusvikira mumwe mambo, akanga asingazivi nezvaJosefa, akamuka muIjipiti.
7:19 uyu, inobatanidza pehama dzedu, anotambudzika madzibaba edu, kuitira kuti vasiye vacheche vavo, varege vakaramba vapenyu.
7:20 Panguva iyoyo, Mozisi akaberekwa. Uye akanga ari nyasha dzaMwari, uye akachengetwa kwemwedzi mitatu mumba mababa vake.
7:21 ndokubva, ndapera akasiya, mukunda waFarao akamubata, uye iye akamumutsa somwanakomana wake.
7:22 Mozisi akadzidziswa uchenjeri hwose hwevaIjipiti. Akava nesimba pamashoko ake uye mabasa ake.
7:23 Asi kana makore makumi mana okuberekwa zvakapedzwa maari, izvozvo akamuka mumwoyo make kuti anofanira kushanyira hama dzake, vanakomana vaIsraeri.
7:24 Zvino wakati aona mumwe kukuvara chete kutambura, akatsigira naye. Uye nokuuraya muIjipiti, akaita vatsiviwe nokuti iye akanga achitsungirira zvinokuvadza.
7:25 Zvino waifunga kuti hama dzake dzaizonzwisisa kuti Mwari aizoita ovapa ruponeso kuburikidza rwake. Asi havana kuzvinzwisisa.
7:26 Saka zvechokwadi, zuva rakatevera, wakazviratidza kune vakange nharo, uye angadai kuyananiswa navo murugare, vachiti, 'Men, muri hama. Saka nei iwe zvakaipa mumwe nomumwe?'
7:27 Asi iye akanga achiita zvinokuvadza wokwake rwakamuramba, vachiti: 'Ndiani akakugadza kuti uve mutungamiri uye mutongi pamusoro pedu?
7:28 Kungava kuti unoda kundiuraya, saizvozvo kuti wakauraya muEgipita zuro?'
7:30 Zvino makore makumi mana apera, kwakaonekwa kwaari, murenje reGomo reSinai, mutumwa, ari mumurazvo womoto mugwenzi.
7:31 Uye paakaona izvi, Moses akashamiswa nezvaakaona. Zvino wakati aswedera pedo kuti vanonyatsomutarira nazvo, inzwi raIshe rikasvika kwaari, vachiti:
7:32 'Ndini Mwari wamadzibaba ako: Mwari waAbhurahamu, Mwari waIsaka, uye naMwari waJakobho. 'Mozisi, kuitwa kubvunda, haana kuda kutarisa.
7:33 Asi Ishe akati kwaari: 'Sunungura shangu patsoka dzako. Nekuti nzvimbo iyo yaumire pairi ivhu dzvene.
7:34 zvechokwadi, Ndaona kutambudzika kwevanhu vangu vari muIjipiti, uye ndanzwa kugomera kwavo. uye saka, Ndiri kuuya pasi kuvasunungura. Saka zvino, vanoenda uye ndikutume kuIjipiti. '
7:35 This Mosesi, vavakagadza nekuraswa vachiti, 'Ndiani akakugadza kuti uve mutungamiri uye mutongi?'Ndiye akatumwa naMwari pachake kuti ave mutungamiri uye mudzikinuri, noruoko nomutumwa akazviratidza kwaari mugwenzi.
7:36 Murume uyu akavabudisa, kuita zviratidzo nezvishamiso munyika yeIjipiti, uye paGungwa Dzvuku, uye mugwenga, makore makumi mana.
7:37 Uyu Mozisi, uyo akati kuvanakomana vaIsraeri: 'Mwari achakumutsirai iwe muprofita akafanana neni kubva kuhama dzako pachako. Unofanira kumuteerera. '
7:38 Uyu ndiye wakange ari mukereke murenje, nomutumwa akanga achitaura naye paGomo reSinai, uye namadzibaba edu. Ndiye wakagamuchira mashoko upenyu kupa kwatiri.
7:39 Ndiye uyo madzibaba edu havana kuteerera. pachinzvimbo, vakaramba iye, uye mumwoyo yavo vakadzokerazve kuIjipiti ichienda,
7:40 Vachiti kuna Aroni: 'Ita vamwari kwatiri, izvo ndiende pamberi pedu. Nekuti Mozisi uyu, akatibudisa kubva muIjipiti, hatizivi kuti chii chakaitika kwaari. '
7:41 Uye saka akaita mhuru mumazuva iwayo, vakabayira zvibayiro chifananidzo, uye vakafara nemabasa emaoko avo.
7:42 Zvino Mwari akafuratira, uye iye akavaisa mumaoko, kuti subservience kune hondo dzokudenga, sezvakanga zvakanyorwa muBhuku Vaprofita: 'Hamuna zvibayiro nezvipo kwandiri kwemakore makumi mana murenje, O imba yaIsiraeri?
7:43 Asi amakanonga pachenyu tende Moloch nenyeredzi yamwari wenyu Rephan, Nhamba iyo imi pachenyu kuumbwa kuti nokuvapfugamira. Uye saka ndichaita kuutapwa, mberi kweBhabhironi. '
7:44 Tabhenakeri yechipupuriro rakanga edu murenje, sezvinoita naMwari kwavari, kutaura naMosesi, saka kuti aizoita kuti maererano chimiro kuti akanga aona.
7:45 Asi madzibaba edu, anorigamuchira, akauya nayo, naJoshua, kunyika vahedheni, uyo akadzingwa Mwari pamberi pechiso chemadzibaba edu, kunyange kusvikira pamazuva aDhavhidhi,
7:46 uyo akawana nyasha pamberi paMwari uye akabvunza kuti agowana tende Mwari waJakobho.
7:47 Asi Soromoni akavaka imba naye.
7:48 Asi Wokumusorosoro haagari mudzimba dzakavakwa nemaoko, sezvaakataura achishandisa muprofita:
7:49 'Denga ndicho chigaro changu choushe, uye nyika ndiyo chitsiko chetsoka dzangu. Yakadini imba kuti munovaka kwandiri? ndizvo zvinotaura Ishe. Uye inova nzvimbo yangu yokuzorora?
7:50 Haana rwangu akaita zvose izvi?'
7:51 Vemitsipa mikukutu uye vasina kudzingiswa pamoyo nenzeve, Wakambonzwa muchipikisa Mweya Mutsvene. Just semadzibaba enyu, saizvozvowo Unoita.
7:52 Ndeupi wevaporofita madzibaba enyu vane asina kutambudzwa? Vakauraya kunyange vaya vakaprofita veMubatanidzwa Akarurama. Uye ikozvino rava vatengesi uye vanoponda pake.
7:53 Imwi vakagamuchira murairo nezvaiitwa Angels, asi hamuna kuuchengeta. "
7:54 ndokubva, pamusoro vachinzwa izvi, ivo vakakuvadzwa zvikuru mumwoyo yavo, uye ivo meno avo kwaari.
7:55 asi iye, vakazadzwa neMweya Mutsvene, uye makatarisisa kudenga akanyatsomutarira, akaona kubwinya kwaMwari, naJesu amire kuruoko rwerudyi rwaMwari. Akati, "Tarirai, Ndinoona matenga akavhurika, uye Mwanakomana wemunhu amire kuruoko rwerudyi rwaMwari. "
7:56 vakabva, akadanidzira nenzwi guru, chakavhara nzeve dzavo uye, nemoyo umwe, vakamhanyira chisimba kwaari.
7:57 Uye kutyaira kumuburitsa, mhiri guta, iye Vakataka. Uye zvapupu zvikaisa nguvo dzavo parutivi tsoka pwere, ainzi Sauro.
7:58 Uye sezvo vakataka Sitefano nemabwe, akadanidzira akati, "Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. "
7:59 ndokubva, ndapera vakotamiswa ake, akadanidzira nenzwi guru, vachiti, "Ishe, musavaverengera chivi ichi. "Akati ataura izvi, akakotsira munaShe. Uye Sauro akanga aripo achibvumirana nokuponda ake.